မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: August 2011 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
သေဟ )Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:55 AM0comments
(ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းတယောက်ထံမှ Forward Mail ပါ။ လူတယောက်ရဲ့
ဘဝတက်လမ်းအတွက် အတုယူစရာ မှတ်သားစရာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဘဝအတွက်အများကြီး
ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီလိုမှတ်သားစရာတွေ
ပညာယူစရာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ လှေကားထစ်တွေအတွက် အားဆေးတခွက်လို့ လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။)
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက် နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော Stanford တက္ကသိုလ်
ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားတွင် Apple Computer နှင့် Pixar Animation
Studio တို့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Steve Jobs ပြောကြားခဲ့ သည့်
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးတခုရဲ့ ဘွဲ့ရ မောင်မယ်များကို
တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း
ပြောပါရစေ။ ကျနော်ဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ တယောက်မဟုတ်ပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်
ဘွဲ့နှင်းသ ဘင် အခမ်းအနားဆိုတာ
ဒီနေ့မှ တက်ဖူးတာပါ။ ဒီ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားမှာ ကျနော့်ဘဝ
ဇာတ်လမ်းလေး သုံးပုဒ် ပြောပါရစေ။ မိန့်ခွန်းအရှည်ကြီး မဟုတ်ပါ။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အကြောင်းအရာတွေ မဟုတ်ပါ။ ဇာတ်လမ်း သုံးပုဒ် ထဲ ပါ။
ကျနော် Reed College မှာ ခြောက်လပဲ တက်ပြီး ကျောင်းထွက် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းက မခွါနိုင်သေးပဲ နောက် ၁၈ လလောက် အတန်းတွေ
ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဘာကြောင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ် ထင်ပါသလဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းက ကျနော် မမွေးခင် အချိန်ကစပြီး ပြောပြရမှာပါ။ ကျနော့်ကို
ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာ အမေဟာ အိမ်ထောင် မရှိသေးတဲ့ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူ
တယောက်ပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကျနော့်ကို မွေးစားဖို့ ပေးလိုက်မယ်လို့
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ကျနော့်ကို မွေးစားမဲ့
မိဘများဟာ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေသာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အမေ့ စိတ်ထဲမှာ အကြီးအကျယ်
စွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဥပဒေပညာရှင် တယောက်နဲ့ သူ့ဇနီးတို့က
ကျနော့်ကို မွေးပြီးပြီးချင်း လွှဲယူလိုက်ဖို့ ကြိုတင် စီစဉ် ထားခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော် ကို “အူဝဲ”
ဆိုပြီး မွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့က မိန်းကလေးမှ လိုချင်ပါ တယ်လို့
စိတ်ပြောင်း သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အချိန်မတော် ညကြီးသန်းခေါင်မှာ
မွေးစား မိဘလောင်း တန်းစီစာ ရင်းထဲက ကျနော့်မိဘများကို ဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ယောကျာင်္းလေး တယောက် ရထားတယ်။ ယူမလား…” တဲ့။
မိဘများကလဲ “သိပ်ယူတာပေါ့…” တဲ့။ အဲဒီလို ပေးလိုက်ပြီးမှ ကျနော့်ရဲ့
အမေဟာ ဘွဲ့ရပညာ တတ်မဟုတ်တာ၊ ကျနော့်ရဲ့ အဖေဟာလဲ အထက် တန်းကျောင်း တောင်မှ
ကျနော့် မွေးမိခင်က သိသွားတာပါ။ မွေးမိခင်ဟာ မွေးစားစာချုပ်မှာ
သဘောတူကြောင်း လက် မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ နောင်လပေါင်း အတော်ကြာပြီး
ကျနော့်ရဲ့ မိဘတွေက ကျနော့်ကို “တက္ကသိုလ် ထားပေးပါ့မယ်…” လို့ ကတိပေးမှ
နောက် ၁၇ နှစ် အကြာမှာတော့ ကျနော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဟာ အဆင်အခြင် ကင်းမဲ့စွာ နဲ့ Stanford တက္ကသိုလ်နီးပါး
စားရိတ်ကြီးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကို ရွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ တတ္ကသိုလ်ပညာရေး
မိဘများရဲ့ စုငွေတွေအားလုံးကို ကျနော်သုံးမိရက်သား ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်ခြောက်လ အကြာမှာတော့ ဒီပညာရေးဟာ တကယ်ပေးရတာနဲ့ တန်တယ်လို့ ကျနော်
မထင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်က ကျနော့်မှာ ဘဝရည် မှန်းချက်ဆိုတာ
တတ္ကသိုလ်ပညာရေးကနေပြီး ကျနော့်ရဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
အဖြေထုတ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာလဲ စဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါ။ ဒီတော့ ကျနော်ဟာ
မိဘတွေရဲ့ တသက်စာစုငွေကို တက္ကသိုလ် မှာလာပြီး ဖြုံးနေတာပါပဲ။
ဒါနဲ့ကျနော်လဲ တက္ကသိုလ်ကထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကျရင်အားလုံး
အဆင်ပြေ သွားမှာပါလို့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့
ကြောက်ကြောက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ ခု ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
ဒီဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ ကျနော့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး
ဆုံးဖြတ်ချက်တခုပါ။ ကျောင်းကထွက်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ မတက်ချင်ဘဲ
တက်နေရတဲ့ အတန်းတွေကို တက်စရာမလိုတော့တာကြောင့် တက်ချင်စရာကောင်းတဲ့
အတန်းတွေထဲမှာ ဝင်ထိုင် ကျောင်းသားလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကဗျာမဆန်တာ တွေလဲပါပါတယ်။ ကျနော့်မှာ နေစရာအခန်း
မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျနော့် သူငယ် ချင်းတွေရဲ့ အခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ
အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Coke ပုလင်းတွေကို လိုက်စုပြီး ပြန်အပ်လို့ရတဲ့ တပုလင်း
ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်ရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်း
ခုနှစ်မိုင်လမ်းလျှောက်ပြီး Hare Krishna ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း မှာ
ထမင်းတနပ် အဝသွားစားရပါတယ်။ စားလို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
စူးစမ်းလိုစိတ်နောက်လိုက်ရင်း၊ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာတွေကို
လိုက်လုပ်ရင်း ကြုံကြိုက်ခဲ့တာ အတော်များများဟာ နောက်ပိုင်းမှာ
အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အ ကြုံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာလေးတခု ပေးပါရစေ။
အဲဒီအချိန်က Reed College မှာ ရှိတဲ့ စာလုံးအလှရေးနည်းသင်တန်းဟာ
တနိုင်ငံလုံးမှာ အကောင်းဆုံးသင်တန်းပါ။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေ တခုလုံးမှာ
ရှိသမျှ ပိုစတာတွေ၊ စာတန်းတွေ၊ နာမည်တွေဟာ အင်မတန်လှပတဲ့ လက်ရေးစာလုံး
ကျောင်းက ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ပုံမှန်သင်တန်းတွေ တက်စရာ မလိုတော့တဲ့
ကျနော်ဟာ စာလုံးအလှရေးနည်းသင်တန်းကို ဝင်တက်ပြီး အတတ်သင်ခဲ့ပါတယ်။
စာလုံးပုံစံတွေထဲမှာ Serif စာလုံးပုံ၊ San Serif စာလုံးပုံတွေအကြောင်းကို
စာလုံးတလုံးနဲ့ တလုံးကြားမှာ ဘယ်လို အနီးအဝေးခြားတယ်ဆိုတာ လေ့
လာခဲ့ပါတယ်။ စာလုံးရေးနည်းပညာရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီပညာရပ်ဟာ အင်မတန်လှပတဲ့၊ သမိုင်းဝင်တဲ့၊ အနုပညာမြောက်ပြီး၊
သိပ္ပံနည်းနဲ့ စူးစမ်းလို့မရတဲ့ ပညာပါ။ ဒီပညာရပ်က
ကျနော့်ကို ညှို့ယူဖမ်းစား ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကို ကျနော့်ဘဝမှာ ဘယ်လိုလက်တွေ့အသုံးဝင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ မျှော်လင့်
မထားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောင် ၁၀ နှစ် အကြာမှာ ပထမဆုံး Macintosh
ကွန်ပျုတာကို ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ အခါမှာတော့ ဒီပညာရပ်ကို ပြန်လည်ပြီး
သတိရလာခဲ့ ပါတယ်။ ဒီပညာရပ်ကို
အစွမ်းကုန်သုံးပြီး Mac ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ Mac ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး
စာလုံးအလှတွေသုံး တဲ့ PC ကွန်ပျုတာပါ။ တက္ကသိုလ်က ဒီသင်တန်းကိုသာ
ကျနော်မတက်ခဲ့ရင် Macintosh ကွန်ပျုတာမှာ အင်မတန်သေ သပ်ပြီး
ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ Windows ဆိုတာကလဲ Mac က
စာလုံးတွေကိုပဲ ကူးချထားတာဆိုတော့ PC တွေပေါ်မှာ စာလုံးအလှ ပေါ်ထွက်ခဲ့မှာ
မဟုတ်ဘူးလို့တောင် ပြော ကောင်းပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်
ကို ကျနော်မတက်ခဲ့ရင် PC တွေပေါ်မှာ စာလုံးလှလှ လေးတွေ
ကျနော်တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်အခါကတော့ အနာဂါတ်ကို ကြိုမြင်ပြီး
ဒီအကျိုးအကြောင်းတွေကို ဆက်စပ်ပုံဖော်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်ဖြစ်
နိုင်ပါ့မလဲ။ နောင် ၁၀ နှစ်ကြာအပြီး အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
ဒီဆက်စပ်မှုတွေကို ရှင်းရှင်းကြီး တွေ့နေရပါ တယ်။
ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့အနာဂါတ်မှာ ဘာတွေဘယ်လို ဆက်စပ်ပုံပေါ်လာမယ် ဆို
တာကို ကျနော်တို့ မမြင်နိုင် ပါ။ နောက်ပြန်ကြည့်မှသာ ဆက်စပ်မှုတွေကို
တွေ့နိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဘွဲ့ရမောင်မယ်တို့တွေဟာလဲ အနာဂါတ်မှာ
ပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားရပါလိမ့်မယ်။ ဘွဲ့ရမောင်မယ်တို့တတွေဟာ
မိမိရဲ့ ရင်တွင်း ခံစားချက်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါ။ ကံစီမံတယ်ဆိုတာ ယုံပါ။
ကံ၏အကျိုးဆိုတာ ယုံပါ။ တခုခုကိုတော့ယုံပါ။ ဒီယုံကြည်ချက် ကြောင့် ကျနော်
ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါ။ ကျနော့်ဘဝကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တာ ဒီ
ကျနော် ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တကယ် စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်ခင်မိတဲ့
အလုပ်ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ အသက်ငယ်ငယ် မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ကျနော့်
မိဘတွေရဲ့ ကားဂိုဒေါင် ထဲမှာ Apple ကို Woz နဲ့အတူ စတင်တည်ထောင်စဉ်က
ကျနော် အသက် ၂၀ ပဲ
ရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက် တကယ်အလုပ်ကြိုးစား ခဲ့ကြတာပါ။ Apple ဟာ
၁၀နှစ် အတွင်းမှာ ကားဂိုဒေါင် ထဲက ကျနော်တို့ ၂ ယောက်ကနေပြီး ဒေါ်လာ သန်း
၂ ထောင်တန် ဝန်ထမ်း ၄ ထောင်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး တီထွင်မှုဖြစ်တဲ့ Macintosh ကို ဈေးကွက်တင်ပြီး တနှစ် လောက်
ကျနော်လဲ အသက် ၃၀ ပြည့်ပြီးခါစလေးပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော်အလုပ်က
ကိုယ်တိုင်တည် ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
အထုတ်ခံရနိုင်ပါ့မလဲ။ အဲ ဇာတ်လမ်းက တော့ဒီလိုပါ။
Apple ကုမ္ပဏီကြီးပွါးလာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်က အင်မတန်တော်တယ်လို့
ထင်ခဲ့တဲ့ လူတယောက်ကို ကျနော်နဲ့အတူ ကုမ္ပဏီမှာ စီမံခန့်ခွဲဖို့
အလုပ်ခန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမတနှစ်လောက်ကတော့ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
အလားအလာတွေကို အမြင်မတူတာတွေ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အကြီးအ
ကျယ် ကတောက်ကဆ ဖြစ်တဲ့အထိပါပဲ။ ဒီကတောက်ကဆ ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သူ့ဖက်က ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အသက် ၃၀ မှာ အလုပ်လက်မဲ့
တကဲ့ကို ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ထုတ်ခံရတာပါ။ ကျနော့် ရဲ့ ဘဝ
တခုလုံးကိုပုံပြီး စိုက်လိုက်မတ်တပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာကြီးကို
ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကျနော့်အတွက် အင်မတန် တုန် လှုပ်စရာ၊ ကြေကွဲစရာ
လပေါင်းအတော်ကြာ တကဲ့ကို ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တီထွင်သူ လုပ်ငန်းရှင် မျိုးဆက်ဟောင်း ကြီးများအပေါ်မှာ ကျနော်
တာဝန်မကျေဘူးလို့လဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့က လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့
တာဝန်ကို ပေါ့ လျော့မိတဲ့၊
လက်ဆင့်ကမ်းပြေးပွဲမှာ တုတ်တိုင် ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့သူလို ခံစားရတာပါ။ ကျနော်
David Packard နဲ့ Bob Noyce တို့ကို သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့
ကျနော့်ကြောင့် ပြဿနာအကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့တာကို ကြိုးစားပြီး တောင်းပန်
ကျနော့်ကျဆုံးခန်းဟာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Silicon Valley ကနေပြီး
အရှုံးပေး ထွက်ပြေးသွားဖို့ အထိတောင် ကျနော်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
အချက်တချက်ကို ကျနော် တဖြေးဖြေးနဲ့ သတိပြုမိလာပါတယ်။ အဲဒါက တော့
ချစ်ခင်ဆဲ၊ စွဲလမ်းဆဲ ဆိုတာပါဘဲ။ Apple မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်
တွေဟာ ကျနော့်ရဲ့ အလုပ်အပေါ် စွဲလမ်းမှု အပေါ်မှာ အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။
ကျနော့်ကို ကန်ထုတ်တာခံရပေမဲ့ ကျနော်က တော့ ချစ်ခင်စွဲလမ်းလျှက်ပါ။
ဒါကြောင့်လဲ ကျနော် တစ်ကနေ ပြန်စဖို့
Apple ကနေပြီး အလုပ်ဖြုတ်ခံရတာဟာ ကျနော့်ဘဝတလျှောက်လုံး
ဖြစ်နိုင်ခဲ့သမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံးအဖြစ်ပါ။ အဲဒီ အချိန်ကတော့
ဒီလိုမတွေးခဲ့မိပါဘူး။ အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးကြီးကို
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူသစ်တခါ ပြန်ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာနဲ့ လဲလိုက်ရတာပါ။
အရာရာတိုင်းမှာ မသေချာ မှုတွေချည်းပါဘဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကပဲ ကျနော့်ကို အနှောင်အဖွဲ့တွေက
နောက် ၅ နှစ် အတွင်းမှာတော့ NeXT ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ကျနော် တည်ထောင်ပါတယ်။
Pixar ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ကျနော် တည်ထောင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်မတန်
ပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ မေတ္တာမျှပြီး ကျနော်အိမ်ထောင်ပြု ခဲ့ပါ
တယ်။ Pixar ကတော့
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကွန်ပျုတာ ကာတွန်းကားကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။
ခုချိန်မှာတော့ Pixar ဟာ ကမ္ဘာ့ အအောင်မြင်ဆုံးကာတွန်းရုပ်ရှင် စတူဒီယို
ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြောစမှတ်ပြုစရာ အလှည့် အပြောင်းမှာ Apple က ကျနော့်ရဲ့
NeXT ကုမ္ပဏီကို ဝယ်ပါတယ်။ ကျနော် Apple
ကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ NeXT မှာ ကျနော်တို့ စတင်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာဟာ Apple
ပြန်လည် ဆန်းသစ်ခြင်းရဲ့ ဗဟိုချက်မှာ ရှိပါတယ်။ Laurene နဲ့
ကျနော်တို့ကတော့ အင်မတန် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးတခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ကျနော်သာ Apple က အလုပ်ထုတ်မခံခဲ့ရရင် ဒါတွေတခုမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တာ
အတော်သေချာပါတယ်။ အလုပ် ထုတ်ခံရခြင်းဟာ အင်မတန်အဝင်ဆိုးတဲ့ ဆေးခါးကြီးပါ။
ဒါပေမဲ့ လူနာကိုကြည့်ရတာလဲ ဒီလိုဆေးမျိုး လိုနေပုံ ပါဘဲ။ တခါတလေ တော့လဲ
ခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုသလို ခံရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ မိမိယုံကြည်ရာကို
မစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ ကျနော့်ရဲ့ ဘဝ တလျှောတ်လုံးမှာ အရာရာကို ဖြတ်ကျော်ဖို့
ခွန်အားပေး နေခဲ့တာဟာ ကျနော့်အလုပ်ကို ကျနော် ချစ်ခင် စွဲလမ်းမှုပဲလို့
ကျနော်ယုံကြည် ပါတယ်။ ဘွဲ့ရမောင်မယ် တို့လဲ
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကို တွေ့အောင်ရှာပါ။ ဒီအ ဆိုဟာ မောင်မယ်
တို့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစားရှာဖို့နဲ့ဆိုင်သလို အလုပ်ရှာဖို့နဲ့လဲ
ခုချိန်ထိမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်လဲ တွေ့တဲ့အထိ ဆက်ရှာပါ။
ရရာနဲ့မကျေနပ်ကြပါနဲ့။ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စဆိုတော့ တွေ့ပြီ လား၊
မတွေ့သေးဘူးလား ဆိုတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့
ဘဝအဖော်မွန်တွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း နှစ်ကြာလေပိုပြီး
ခိုင်မြဲလာလေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မောင်မယ်တို့
အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကို တွေ့အောင်ရှာ ကြပါ။ ရရာလေးနဲ့
ကျနော်အသက် ၁၇ နှစ်မှာ ကောက်နှုတ်ချက် စာသားတခု ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်တော့ “နေ့တိုင်းကို သင့်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်
နေထိုင်ခဲ့ရင် တနေ့မှာတော့ အဲဒီအတိုင်းဖြစ်လာဖို့ သေချာပါတယ်” တဲ့။
ကျနော့်စိတ်မှာထင်ဟပ် သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး နောက် ၃၃ နှစ်လုံး
မနက်အိပ်ရာထမှာ မှန်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ် မေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒီနေ့သာ
ငါ့ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ဆိုရင် ဒီနေ့ လုပ်မဲ့အလုပ်တွေကို ငါ
လုပ်ချင်ပါ့မလား” မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ ရက်ပေါင်းများစွာ
ဆက်တိုက် “မလုပ်ချင်ဘူး” ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ အပြောင်းအလဲ တခုခုလုပ်ဖို့
လိုနေပြီလို့ ကျနော် သိလိုက်ပါတယ်။
ဘဝအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရာမှာ အရေးကြီးဆုံး
အထောက်အပံ့ကိရိယာအဖြစ် ကျနော်တွေ့ ရှိခဲ့တာကတော့ သေခြင်းတရားဟာ
လက်တကမ်းမှာပဲ ရှိတယ်လို့ သတိချပ်ခြင်းပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရေးမပါတဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေ၊ ဂုဏ်မာနတွေ၊ အရှက်ကွဲမှာ
ဒါမှမဟုတ် ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ ဒါတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ
သေခြင်းတရား ဆိုတာနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရင် အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားပြီး
မင်းမှာလက်လွှတ် ဆုံးရှုံးစရာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့
အတွေးထောင်ချောက်ကို ရှောင်လွှဲဖို့ နည်း လမ်းတွေထဲမှာ ကျနော်သိတဲ့
အကောင်းဆုံး နည်းကတော့ မင်းဟာသေရတော့မှာဘဲလို့ သတိချပ်ခြင်းပါ။ မင်းဟာ ဗ
လာထီးထီး ကိုယ်ချည်းဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီတော့
ကိုယ့်နှလုံးသားရဲ့ ခေါ်ရာနောက်ကို မလိုက်ဘဲနေဖို့ရာ အကြောင်းမရှိ တော့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က ကျနော့်မှာ ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့
တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၇နာရီ ခွဲမှာ ဆေးဓာတ်မှန်ရိုက် ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့
သရက်ရွက် (Pancreas) မှာ အကြိတ်ရှိတာ ဓာတ်မှန်မှာ ထင်းထင်းကြီး
ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင်မှ ကျနော်မသိခဲ့ပါ။ ဒီလို ကင်ဆာမျိုးဟာ
ကုစရာဆေးမရှိတဲ့ ကင်ဆာမျိုးဖြစ်ဖို့ အတော်သေ ချာတယ်လို့ ကျနော့်ကို
ဆရာဝန်ကြီးတွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက် ၃လ ကနေ ၆လ အထိဘဲနေရဖို့
မျှော် လင့်ထားပါလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါဟာဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ ကလေးတွေကို နောင် ၁၀ နှစ် အတွင်းမှာ
ပြောပြ ဖို့ စဉ်းစားထားသမျှကို နောင်လ အနည်းငယ်အတွင်းမှာ
အကုန်အစင်ပြောဖို့ ကြိုးစားပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပါပဲ။ ကျန်ရစ် သူမိသားစု
ကိစ္စတွေအားလုံးကို လက်စသိမ်းပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သွားတော့မယ်လို့
တနေ့လုံး ဒီကင်ဆာ အကြောင်းကဘဲ ကျနော့်ကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့
ညနေမှာတော့ အသားစထုတ်ပြီး ဆေး စစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်
အတွင်းပိုင်းကြည့် ကရိယာကို ကျနော့်လည်ချောင်း ထဲကတဆင့်
အစာအိမ်ကိုဖြတ်ပြီး အူ သိမ်ထဲကိုရောက်အောင်
ထည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျနော့်ရဲ့ သရက်ရွက်ကို အပ်နဲ့စိုက်ပြီး အသားစ
အနည်းငယ်ကို ထုတ်ယူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က မေ့ဆေးနဲ့
မျောနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတူရှိနေတဲ့ ဇနီးက ပြန်ပြောခဲ့တာက ဒီအသားစကို
ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ “ဟေးကနဲ…” ထပြီးအော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ကင်ဆာဟာ အင်မတန်မှ ရှားပါးတဲ့
ခွဲစိတ်ပြီးကုသလို့ရတဲ့ သရက်ရွက်ကင်ဆာမျိုး ဖြစ်နေ လို့ပါ။ ကျနော်
ခွဲစိတ်ကုသခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် အခုနေကောင်းပါပြီ။
ဒါဟာ ကျနော့်အဖို့ သေခြင်းတရားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရင်ဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းပါဘဲ။
နောင် ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာလဲ ဒီထက် ပိုပြီးနီးနီးစပ်စပ်
မတွေ့ကြုံရတော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့
အတွက်ကြောင့် ဘွဲ့ရမောင် မယ်တို့ကို သေခြင်း
တရားအကြောင်း ပြောပြရာမှာ သုံးဖြစ်ရုံ ဥာဏ်သိအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထက်
နဲနဲပိုပြီး သေသေချာ ချာ ကျနော် ပြောနိုင်ပါပြီ။
*ဘယ်သူမှမသေချင်ပါဘူး။ ကောင်းကင်ဘုံကို သွားချင်တဲ့သူများတောင်မှ
အဲဒီကိုရောက်ဖို့ မသေချင်ကြပါဘူး။ သို့သော် လည်း လူတိုင်းဟာ တနေ့တော့
ဒါဟာလဲ ဖြစ်သင့်လို့ပါ။ ဘဝတရားရဲ့ တခုတည်းသော အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုဟာ
မရဏတရား ဖြစ်စရာအကြောင်း ရှိပါ တယ်။ မရဏတရားဟာ ဘဝဖြစ်တည်ခြင်းတရားရဲ့
အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ဖော်ဆောင် ပေးတဲ့အရာပါ။ မရဏတရား က
ဟောင်းဆွေးအိုမင်းမှုတွေကို ဖယ်ရှားပြီး နုပျိုသစ်လွင်မှုတွေနဲ့
အစားထိုးပေးနေပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှတော့ ဘွဲ့ရမောင်မယ်တို့ဟာ
နုပျိုသစ်လွင်မှုတွေနဲ့ အပြည့်ပါ။ သို့သော်မကြာတော့တဲ့ အခါမှာ
မောင်မယ်တို့လဲ အိုမင်းရင့်ရော် လာမှာပါ။
ပြီးတော့အဖယ်ရှားခံကြရမှာပါ။ စိတ်ထိခိုက်အောင်ပြောမိတာကို ကျနော်
တောင်းပန်ပါတယ်။ သို့သော်လဲ ဒါက အမှန်တရားပါ။
ဘွဲ့ရမောင်မယ်တို့မှာ အချိန်တွေအများကြီးမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့တခြားသူတွေ
နေသလိုဘဲနေပြီး အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့။ သူများတွေရဲ့ အတွေးအထင်ထဲကအတိုင်း
နေရတဲ့ဘဝကို တရားသေဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ချောင်ပိတ်မမိပါစေနဲ့။ မိမိရဲ့အ
သူတပါးတွေရဲ့ထင်မြင်ချက် အနှောင့်အယှက်သံတွေက ဖုံးလွှမ်းမသွားပါစေနဲ့။
*ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့
ရင်တွင်းသိစိတ်တို့က ခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်ပါ။* သူတို့ က မောင်မယ်တို့
အမှန်တကယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သိနေကြပြီးသားပါ။ ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးက
ကျနော်ငယ်စဉ်အခါက “The Whole Earth Catalog” ဆိုတဲ့ အင်မတန်
ပြောင်မြောက်တဲ့ ကတ်တလောက်စာအုပ် တခု ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာအဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့တွေအတွက်တော့ ကိုးကွယ်စရာကျမ်းစာတွေထဲက
အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ ဖန်တီးရှင်ကတော့ ဒီ Stanford တက္ကသိုလ် နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့
Menlo Park မှာနေတဲ့ Stewart Brand ဆို သူပါ။ ဒီစာအုပ်ကို သူက
ကဗျာဆန်ဆန်အလှတွေနဲ့ ချယ်မှုန်းပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ ဒီစာအုပ်ကို
ထုတ်ဝေချိန်က ၁၉၆၀ ခုနှောင်းပိုင်းကာလ
ကွန်ပျူတာနဲ့ ကွန်ပျူတာစာစီလုပ်ငန်းတွေ မပေါ်ခင်ကပါ။ အဲဒီတော့
စာအုပ်တအုပ်လုံးက လက်နှိပ် စက်ရိုက်၊ ကပ်ကြေး နဲ့ကိုက်၊ Polaroid
ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး စာအုပ်ကို ဖန်တီးရတာပါ။ Google ကို
စာအုပ် အဖြစ် ဖတ်ရသလိုပါပဲ။ ဒ်ီစာအုပ်ဟာ Google
မတိုင်ခင် ၃၅ နှစ်က ပေါ်ခဲ့တာပါ ။ တကယ့်ကို စံနမူနာယူစရာ စာအုပ်ပါ။
စာအုပ်တခုလုံးလဲ သပ်ရပ်လှပတဲ့ ကရိယာတွေနဲ့ အကြံကောင်းတွေနဲ့
Stewart နဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာ “The Whole Earth
Catalog” စာအုပ် တော် တော်များများကို
ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ဝေခြင်းကနေ ရပ်ဆိုင်းရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တတွေ
နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ခြင်းစာအုပ်ကို ထုတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ခုဘွဲ့ရမောင်မယ်တို့ရဲ့ အရွယ်၊ ၁၉၇၀
နှစ်လယ်ကာလများပါ။ နှုတ်ဆက်စာအုပ်ရဲ့ ကျောဖုံးပုံက မနက်စောစော
တောဘက်ကကားလမ်းလေးတခုရဲ့ ဓာက်ပုံပါ။ စွန့်စားခန်း အင်မတန် ကြိုက်သူများ
တွေ့ကောင်းတွေ့ဖူးကြမဲ့ ကားလမ်းလေးမျိုးပါ။ အောက်မှာစာတန်းလေးရေး
ထားပါတယ်။ “ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပါ။ အရူးထပါ။” တဲ့။
ဒါသူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ်မှာ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါ။ ကျနော်
ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီဆုကိုပဲ အမြဲတမ်းတောင်းခဲ့ ပါတယ်။ ခုဘွဲ့ရမောင်မယ်
တို့ဘဝအသစ် စကြရတော့မယ်ဆိုတော့ မောင်မယ်တို့ကိုလဲ ဒီဆုကိုပဲ
နေ့သစ်မှ ...Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:53 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:49 AM 1 comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:17 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:16 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:15 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:14 PM0comments
ဂဒါဖီ ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေ အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာ ခိုလှုံ
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) တနင်္လာ, 29 သြဂုတ် 2011 (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မိုမာ ဂဒါဖီ (Moammar Gadhafi) ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ကလေး ၃ ယောက်ဟာ တနင်္လာနေ့မှာ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူတို့ကို အယ်လ်ဂျီးရီးယား အာဏာပိုင်တွေက လစ်ဗျားကို နောက်ပိုင်းမှာ လွှဲပြောင်းပြီး အပ်နှံပေးဖို့ လစ်ဗျား အတိုက်အခံ သူပုန်တွေက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မစ္စတာ ဂဒါဖီရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဆဖီယာ (Safiya)၊ သမီး အီရှာ (Aisha) နဲ့ သား ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက် (Mohammad) နဲ့ ဟန်နီဘောလ် (Hannibal) တို့ဟာ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကို ကားနဲ့ လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂဒါဖီရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ သားမက်၊ ချွေးမနဲ့ မြေးတွေပါ အတူ လိုက်ပါလာကြတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီလို ရောက်လာကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီကိုရော၊ လစ်ဗျား အတိုက်အခံတွေရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အမျိုးသားကောင်စီ (TNC) ကိုပါ အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
မြောက်အာဖရိက ဒေသက လစ်ဗျားရဲ့ တဦးတည်းသော အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယားက လစ်ဗျား အတိုက်အခံ TNC အဖွဲ့ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ မစ္စတာ ဂဒါဖီကို ထောက်ခံနေတဲ့အပြင် ကြေးစား စစ်သားတွေကိုပါ စေလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ အတိုက်အခံ သူပုန်တွေဘက်က အရင်တုန်းက စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယားက ဒါကို ငြင်းဆိုပါတယ်။
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ဂဒါဖီနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သားတွေ အခုထိ ဘယ်မှာရှိနေတယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြသေးပါဘူး။
သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ ခါမစ်စ် (Khamis) ဟာ စနေနေ့ ထရီပိုလီ (Tripoli) မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ အတိုက်အခံ ထိပ်တန်း အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုထက်ထိ အတိအကျ ဘယ်သူမှ မသိသေးပါဘူး။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:13 PM0comments
2011-08-29 RFA (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုအပြီး ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ YouTube အပါအဝင် blog အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို တိုက်ရိ်ုက် ဖွင့်ကြည့်လို့ ရနေတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က အင်တာနက် သုံးစွဲသူတဦးက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး တားမြစ်ထားတဲ့ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေ ကြည့်ရှုခွင့် ပေးလာတဲ့နေရာမှာ အသိပညာ ဗဟုသုတနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဖွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ ရုပ်ရှင်၊ ဒီဇိုင်း၊ ကွန်ပြူတာ စသဖြင့် ဘာသာရပ်မျိုးစုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို အင်တာနက်ကတဆင့် လေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်း စောစောက အင်တာနက် သုံးစွဲသူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး MPT နဲ့ ရတနာပုံ တယ်လီပို့ တို့ကသာ ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ အခု အင်တာနက် အတန်အသင့် ပြန်ပွင့်လာတယ် ဆိုရာမှာ ကြည့်လို့ရတဲ့ စာမျက်နှာချင်း တခုနဲ့တခု မတူဘဲ တချို့ကို MPT လိုင်းက ကြည့်လို့ရပြီး တခြား စာမျက်နှာတွေကို ရတနာပုံ တယ်လီပို့လိုင်းကနေ ကြည့်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် စတင်သုံးစွဲတဲ့ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ကတည်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုလို့ မရအောင် စစ်အစိုးရက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုတရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု လွှတ်တော်အမတ်တွေက လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီအဆိုကို ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
အမတ်အများစုက ကန့်ကွက်ခဲ့ တာကြောင့် ပယ်ချခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုတင်သွင်းတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်က ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ပြတာ၊ သုံးစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကာလ တရပ်အတွင်း ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်အောင် ထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်သွားမယ့် အဖွဲ့တရပ် ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုတင်ခဲ့ပေမယ့် ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတယ်လို့ အာအက်ဖ်အေကို ပြောဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ခွဲဝေ သုံးစွဲနေသလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို ဆွေးနွေးခွင့် မရဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
အခု ကျင်းပနေတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အမတ်တွေ ဆွေးနွေး တင်ပြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ကို အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခွင့်မရဘူးလို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းရင်းသား အမတ်တွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:10 PM0comments
တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
မြန်မာစစ်တပ်ချောဆွဲသွားစဉ်ကတည်းကပျောက်ဆုံး နေသော ရွာသား ၃ ယောက်အား ၎င်းတို့တပ်ဆုတ် ပြန်ပြီး နောက်ပိုင်း ဆွေမျိုးများ သွားရောက်ရှာဖွေရာ ချောက်ထဲ၌ အရိုးစုများတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည် အလယ်ပိုင်း မှလာသော သတင်းအရ သိရသည်။
“ ကျနော်တို့အကို ယာသွားစောင့်ရင်းနဲ့ ချောဆွဲခံရတာ ဂျူလိုင်လကတည်းကဘဲ။ ပြန်မလာတော့ လဲလိုက်မရှာ ရဲကြဘူး။ ဗမာစစ်တပ်တွေက အဲဒီဘက်မှာရှိနေတယ်လေ။ ဒီလ ၂၅ ရက်ကြာသပတေး နေ့တုန်းက သူတို့ စခန်းဖြုတ်တပ်ဆုပ်သွား ပြီးပြီးချင်း ကျနော်တို့ သွားရှာကြတယ်။ ဟိုးချောက် ထဲမှာ အလောင်း ၃ လောင်းရဲ့ အရိုးစုတွေ။ သူတို့စီးထားတဲ့ ဖိနပ် တောင် မကျွတ် မပျက်သေးဘူး” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြန်လည်ပြော ပြသည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရပ်ရွာအကြီးအကဲတဦးက - ပင်လုံအခြေစိုက် ခမရ ၅၁၃ က တာ့ဆမ်ပူး၊ ကုန်းနင်၊ မိုင်းခန်၊ တူယားရွာများ သားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများကို လုယက်ဓါးပြတိုက်ယူခြင်း ၊ မိုင်းနောင် ခလရ ၂၈၆ က မိုင်းနောင်မြို့ နယ်ခွဲတွင် ကျေးလက်ရွာသူများအား ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကျွဲနွားများသတ်စားခြင်း၊ လဲချား ခလရ ၆၄ ကမူ လဲချား ဈေးအတွင်းရွာသားအားထိုးကြိတ် ရိုက်နက်စစ်ဆေးသောကြောင့် အဆိုပါတပ်များအား ရွားသားများက ကြောက်လန့်နေ ကြသည်ဟု ပြောပါသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:09 PM0comments
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းကြောင့် ရွာ ၅ ရွာ အရင်ဆုံး ပြောင်းရွှေ့ရမည်
တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် စောခါးစူး သတင်း - ကေအိုင်စီ (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဆောက် လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြောင့် ထားဝယ်မြို့နယ်တွင်းရှိ နဘူးလယ်ကျေး ရွာအုပ်စုရှိ ရွာ ၅ရွာ ပထမဆုံး အသုတ်အနေနှင့် ပြောင်းရွှေ့ခံရတော့မည်ဟု ထားဝယ်ဒေသခံများက ပြောသည်။
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းနယ်မြေအတွင်း ကျရောက်နေသောကြောင့်ဟု ဆိုကာ ပြောင်းရွှေ့ရန် သြဂုတ်လအတွင်း က အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့က အဆိုပါ ရွာများသို့ သွားရောက်အသိပေး ခဲ့သည်။ သို့သော် မည်သည့်ရက်လ အတွင်း အပြီးအပိုင် ပြောင်းရွှေ့ရမည်ကိုမူ အချိန်ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထားဝယ်ဒေသခံတဦးက ပြော သည်။
“ရွာတွေကို ပေါင်းပြီး တစုတည်းပဲ ပေါင်းထားမယ်။ (နေရာသစ်မှာ) အုတ်ကာ သွပ်မိုး၊ နောက် သစ်သား အိမ်တွေ ဆောက်ပေးမယ်ပေါ့။ သူတို့(ကုမ္ပဏီနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်) က အိမ်နံပါတ်တွေလာတပ်ပေးနေ ပြီ။”ဟု ပြောသည်။
နဘူးလယ်ကျေးရွာ အပါအ၀င် ပရဒတ်၊ ထိန်ကြီး၊ လွဲရှောင်နှင့် မူဒူးကျေးရွာများကိုနဘူးလည်ကျေးရွာ အုပ်စု နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဘာဝရွာနှင့် ဘာဝဆိပ်ကမ်းအကြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုဒေသကို သွားရောက်ခဲ့သည့် ဒေသခံ သတင်းထောက်တဦးဖြစ်သူ စောအယ်နာက “အဲဒီရွာသားတွေ ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ပြီဆိုရင် သူတို့အတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အခက်အခဲတွေ့မယ်။ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ သူတို့ အလုပ်လုပ် ဖို့ မြေကွက်တွေ မရှိတော့ဘူးလေ။”ဟု ပြောသည်။
ထိုဒေသခံများသည် အများအားဖြင့် ဓနိ၊ ထန်း၊ ရာဘာ၊ နာနတ်နှင့် သီဟိုဠ် စသည့်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းများ ကို အဓိက လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့်အပြင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းကြောင့် ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် မြန်မာ၊ ကရင်နှင့် မွန် ဒေသခံရွာပေါင်း ၃၀ကျော် ပြောင်းရွှေ့ရဖွယ်ရှိသည်ဟုလည်း စောအယ်နာက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အစောဆုံးအသုတ်အနေနှင့် ရွာ ၅ရွာကို ပြောင်းရွှေ့ရန် အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီတို့ကစီစဉ်နေသော် လည်း ဒေသ ခံများ၏ ဆုံးရှုံးမှုများအား လျော်ကြေးပေးရေးနှင့် မည်သည့်လျော်ကြေးပမာဏ ပေးမည်ကို မသိရသေးပေ။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို ဘန်ကောက်အခြေစိုက် Italial-Thai Development က ထိုင်းဘတ်ငွေ ၄၀၀ ဘီလျံ ကျော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီး စီမံကိန်းနေရာကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက လာရောက်လေ့လာ ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့ကနားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့သည်။
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေး၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ စက်မှုဇုံနယ်မြေများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနံဓာတုဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ခြင်း၊ ရေနံ ချက်စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သံမဏိ စက်ရုံ၊ လျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထားဝယ်-ကန်ချနဘူရီ(ထိုင်းနိုင်ငံ) အဝေးပြေးကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကားလမ်းနှင့်ရထား လမ်းတစ်လျှောက် ရေနံပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:04 PM0comments
လင်းသန့် Monday, 29 August 2011 16:37 (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:02 PM0comments
ဧရာဝတီ Monday, 29 August 2011 16:54 (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း စက်မှု ၂ ၀န်ကြီးဌာနက ပြည်တွင်းထုတ် ကားစီးရေ ၉၈၈၈၄ စီးထုတ်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကားစီးရေ ၉၅၇၇ စီး ထုတ်လုပ်ခွင့် ပြုထားကြောင်း အမှတ် ၂စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တရပ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:01 PM0comments
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် များစွာ သက်ရောက်စေမည့် စီမံကိန်းကြီးများတွင် အကျိုးအမြတ်ကို မည်သူ ရရှိမည်၊ လူမှုစီးပွားရေးကို မည်သို့ ပြန်လည် နေရာချထားမည် ဆိုသည်မှ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် များစွာ သက်ရောက်စေမည့် စီမံကိန်းကြီးများ ပြုလုပ်ရာတွင် ယင်းမှ အကျိုးအမြတ်ကို မည်သူ ရရှိမည်၊ လူမှုစီးပွားရေးကို မည်သို့ ပြန်လည်နေရာချ ထားမည် ဆိုသည်မှာ အဓိက အချက် ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
''အရင်းအမြစ်တွေကို အသုံးချပြီး ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ပြည်သူတွေ ရမလား၊ ဘယ်သူရမလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါ တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဒေသ၀န်းကျင်က လူထုကို ပြန်လည်နေရာချထားဖို့၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ ပြန်လည်အခြေကျ ဖို့၊ မြစ်ချောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်''ဟု ဆည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကို လေ့လာ ခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ပညာရှင်က ဆိုပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ယခုအခါတွင် မြစ်အနည်းငယ်သာ မူလ အနေအထား သဘာဝအတိုင်း ပင်လယ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ခွင့် ရရှိကြပြီး သဘာဝအတိုင်း စီးဝင်ခွင့် မရရှိတော့သည့် မြစ်များတွင် လူများ ဖန်တီး တည်ဆောက်ထားသည့် ဆည်များ ရှိနေကြသည်။
''ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ မြစ်တွေရဲ့ စီးဆင်းပုံနဲ့ လူထု အပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေက ကန့်ကွက်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကမ္ဘောဒီး ယား၊ မြန်မာတို့လို နိုင်ငံတွေမှာ စီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့ အပြောင်းအလဲလုပ် ရွေးချယ်လာကြပါတယ်''ဟု ၎င်းက ပြောပါသည်။
သဘာ၀၀န်းကျင်ကို သက်ရောက်စေမည့် စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ကြိုတင် လေ့လာ ဆန်းစစ် သည့် Environmental Impact Assessment (EIA) ပြုလုပ်ခြင်းများ နိုင်ငံများစွာတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အကယ်၍ ဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည် ဆိုပါက အစိုးရအနေဖြင့် မပြုလုပ်မီ ပြင်ဆင် စဉ်းစားမှုများ ပြုလုပ်ရန်လည်း EIA က ပြဆိုခဲ့သည်။
''လာအိုမှာ ထိုင်းက ဆည်ဆောက်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။ လာအို အစိုးရက စီမံကိန်း လက်မခံခင် လေ့လာ ဆန်းစစ် တဲ့အခါ ငါးလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေမယ် ဆိုတာ၊ မြစ်စီးဆင်းပုံကို ထိခိုက်စေမယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိတယ်။ အစိုးရက ငါးလုပ်ငန်း က ပြည်သူတွေ အတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိတယ် ဆိုတာကို နားလည်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဆည်ကို ဆောက် လုပ် ဖို့ ရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်''ဟု ဆက်လက် ပြောပြသည်။
''ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ဆောက်မယ့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် သိရှိထားခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ မေးခွန်းတွေလည်း အများကြီး ရှိနေကြတာ တွေ့ရတယ်။ လေ့လာမှုတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ လိုဦးမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ EIA လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုကို၊ သဘာ၀၀န်းကျင်ကို ဘယ်လောက် သက်ရောက်စေ မယ်ဆိုတာ မပါဘူး ထင်ပါတယ်။ ငါးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို သက်ရောက်နိုင်တယ် ဆိုတာ လည်း ထပ်ပြီး လေ့လာဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်''ဟု ၎င်းက သုံးသပ်ပြသည်။
Via eleven media group
Posted by အာဇာနည် at 4:54 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 4:37 PM0comments
Rome ရုပ်ရှင်ပြပွဲကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ၂၇ ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ အပြင် သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှု ကို ဖော် ကျူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ် လမ်းမှာ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Michelle Yeoh က အဓိက ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ထားပြီး ပြင်သစ်လူမျိုး ဒါရိုက်တာ Luc Besson က ရိုက်ကူး တင်ပြထားတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုကို မိမိအနေနဲ့ အလွန် ပဲ အလေးထားမိကြောင်းနဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား က တဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို ကမ္ဘာက ပိုမို သိရှိနားလည်လာမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီလို့ Michelle Yeoh က ပြောပါတယ်။
Michelle Yeoh ဟာ ဒီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ဖို့ ကြိုးစား စဉ်မှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 4:32 PM0comments
နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုတရပ်ကို ဒီမိုကရေစီအင်အားစုလွှတ်တော် အမတ်တွေ က လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီအဆိုကို ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အမတ်အများစုက ကန့်ကွက်ခဲ့ တာကြောင့် ပယ်ချခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုတင်သွင်းတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်ကဘတ်ဂျက်လိုငွေ ပြတာ၊ သုံးစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကာလ တရပ်အတွင်း ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်အောင် ထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်သွားမယ့် အဖွဲ့တရပ် ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုတင်ခဲ့ပေမယ့် ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတယ်လို့ အာအက်ဖ်အေကို ပြောဆိုပါတယ်။
အခု ကျင်းပနေတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အမတ်တွေ ဆွေးနွေး တင်ပြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေး စိတ်ကို အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခွင့်မရဘူးလို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းရင်းသား အမတ်တွေ က ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 4:27 PM0comments
ဧရာဝတီ Monday, 29 August 2011 16:54
ပြည်တွင်းသို့ တရားမ၀င် တင်သွင်းလာသော ဂျပန်လုပ် Super Custom ယာဉ်များကို အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ဒဏ်ကြေး ရိုက်၍ ဒေါ်လာဈေး ပြန်လည်မြင့်တက်စေရန် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာ န ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက တရားဝင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြည်တွင်းသို့ တရားမ၀င် တင်သွင်းလာသည့် Super Custom ခေါ် Hi – Ace ကားများကို ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်ထုတ် ကားများ အဖြစ် လိုင်စင်ဝင်သောအခါ ဒဏ်ရိုက်သည့်အနေဖြင့် ယခင်က မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အခွန်ဆောင်စေ ခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယခုအခါ ကျပ်ငွေအစား ဒေါ်လာဖြင့် ပြောင်းလဲဒဏ်ရိုက်၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ တန်ဖိုး မြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးသိန်းက ဆိုသည်။
ဂျပန်လုပ် Super Custom ကားများကို စက်မှုဇုန်ထုတ် ကားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် လိုင်စင်ဝင်သည့်အချိန်တွင် ဒဏ်ရိုက်သည့် အနေဖြင့် ယခင်က ကားတစီးလျှင် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဒဏ်ဆောင်ရကြောင်း၊ ယခုအခါ တစီးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀ ဆောင်ရ မည် ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ သတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။
“အံစာတုံးပုံစံကားတွေကိုတစီး ဒေါ်လာ၂ သောင်း ဆောင်ခိုင်းတယ်။ စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်အထိ နှစ်ပတ်အတွင်း ဆောင်ရမှာပါ။ စုစုပေါင်း ကားစီးရေ ၈၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ အဲဒီလို ဒေါ်လာနဲ့ ဆောင်ခိုင်းတာက ဒေါ်လာတန်ဖိုးပြန်တက်ပြီး ပို့ကုန် စီးပွားရေး ပြန်ကောင်းလာစေချင်လို့ ဆိုပြီး ၀န်ကြီးက ပြောတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများက Super Custom ကား အများစုကို နယ်စပ်၊ ဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့် အကောက်အခွန် ဦးစီး ဌာန အပါအ၀င် အာဏာပိုင်များကို ကျပ် သိန်းထောင်သောင်းချီ လာဘ်ပေးကာ တင်သွင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၀ယ်ယူ သူ ပြည်သူများ လက်ထဲသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစိုးရ၏ ဒဏ်ငွေရိုက်ခြင်း အစီအစဉ်သည် Super Custom ကား ၀ယ်ယူထားသူ ပြည်သူများကို အထိနာစေမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ ကားပွဲစားများက ပြောကြသည်။
“ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေက လာဘ်ထိုးပြီး သွင်းခဲ့ကြတာ။ အခု သူတို့လက်ထဲမှာ ကားတွေမရှိတော့ဘူး။ တစီးကို ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လောက်နဲ့ ရောင်းပြီးသွားပြီ။ ၀ယ်စီးတဲ့သူတွေ လက်ထဲမှာ ကားတွေက ရောက်နေပြီ။ အခုလို ကားတစီး ကို ဒေါ်လာ သောင်းချီ ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ကားဝယ်စီးမိတဲ့သူတွေ အတော်ဒုက္ခ ရောက်ပြီ။ တကယ်လို့ ဒဏ်ကြေး မဆောင်နိုင်ရင် လည်း ကားက လိုင်စင်မဲ့ကားဖြစ်သွားပြီ” ဟု ဟံသာဝတီ ကားပွဲစားတဦးက ရှင်းပြသည်။
Super Custom ကားများကို ဒေါ်လာသောင်းချီ ဒဏ်ဆောင်ပြီးမှသာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယနေ့ အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ အရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာတန်ဖိုး ထိုးတက်ခြင်း မရှိသေးပေ။
“ဒေါ်လာဈေး တအားထိုးတက်တာ မျိုးတော့မရှိဘူး။ တအိအိတော့တက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ 0ယ်အားများလာရင်တော့ ဈေး သေချာပေါက် တက်မှာပါ” ဟု ဒေါ်လာငွေလဲဒိုင် တဦးက ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 4:22 PM0comments
မောင်ရမ္မာ News Date:8/29/2011နိရဉ္ဖရာသတင်းဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့နယ်တွင် စခန်းချထားသော ရေတပ်စခန်းမှ တရားမ၀င် အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ကာ ဒေသခံငါးဖမ်းသမား များ ထံမှ ဆက်ကြေးများ တိုးမြှင့် ကောက်ခံနေကြောင်း သိရသည်။
ငါးဖမ်းစက်လှေ တစီးအနေဖြင့် တစ်လကို ကျပ် ၁၀၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ခွဲထိ ပေးသွင်းရန်ကို မျှော်တော်ဦး ရေတပ် စခန်းမှ ဗိုလ်မှူး အောင်ငွေ မှ အမိန့်ထုတ်ထားသည်ဟု မျှော်တော်ဦး ရွာသား တဦးက ပြောသည်။
ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် မာန်အောင်ကျွန်းအကြား ပင်လယ်ပြင်တွင် ငါးပေါများသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားက လာရောက် ငါးဖမ်းကြ သည်ဟု သိရသည်။ ထိုအထဲတွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှ ကျောက်နီမော်၊ ဦးက၊ အောင်လှပြင် ကျေးရွာနှင့် မာန်အောင် မြို့နယ်မှ ခအုံးမော်၊ ကုန်တန်း၊ ဇရပ်ကုန်းခင်၊ ပြားကြီး၊ မျှော်တော်ဦး၊ သစ်ပုံကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသည်။
မာန်အောင်မြိ့နယ် တောင်ပိုင်းတွင် ရှိသော ဇီးတော၊ ကျူ၊ မကွေး၊ ကအိ၊ ကမား ကျေးရွာများရှိ ငါးဖမ်းသမား များထံမှလည်း ရဲမိသား စု ရံပုံငွေဟုဆိုကာ ကမားရဲစခန်းမှ ငါးဖမ်းဘုတ်တစီးကို တစ်လလျှင် ကျပ်ငွေ ၁၂၀၀၀၊ ငါးဖမ်းလှေတစီးကို ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ စီကောက် ခံနေသည်ဟု သိရသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဇင်ချောင်းကျေးရွာတွင် ငါးဖမ်းစက်လှေများမှ ငွေလက်ခံ ရရှိကြောင်း ငွေရ ပြေစာ မပေးဘဲ လိုင်စင်ကြေးဟုဆို ကာ ခရိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ငါးဖမ်းစက်လှေ တစ်စီးကို ကျပ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ကောက်ယူ နေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သော ပြည်သူများ ဆင်းရဲ မွဲတည်နေကြရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်း အရင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်စွဲ ထားသော စစ်တပ်၊ ရေတပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ တရားမ၀င် အကောက်များကို အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး ကောက်ယူနေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ တိုင်းပြည် အာဏာကို ရယူထားသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ် အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဆင်းရဲ မွဲတည်မူကို လျှော့ချ လိုလျှင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့်ပြီး အခွန်အကောက် ကောက်ခံနေမူကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်လိုကြောင်း ရခိုင်ပြည်သူများက ထင်မြင် ယူဆ ပြောဆိုလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by အာဇာနည် at 4:14 PM0comments
ကဒါဖီ ထရစ်ပိုလီ နားမှာ ရှိနေနိုင်ဆဲBBC News ။ ။ 27-08-2011 Via Burmatwe
ကဒါဖီရဲ့ မြေအောက် ကတုတ်ကျင်း တခုလစ်ဗျား နိုင်ငံ မှာတော့ သူပုန် ခေါင်း ဆောင် တွေက ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ ဟာ ထရီပိုလီ မြို့တော် ရဲ့ အနီး တဝိုက် မှာ ပုန်းအောင်း နေဆဲပဲ လို့ သူတို့ ယုံကြည် ထားကြောင်း ပြောပါတယ်။
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဘယ်မှာ ရှိနေ နိုင် သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုက် အခံ တွေရဲ့ ပထမဆုံး ထင်မြင်ချက် ကို ပြောခွင့် ရသူက ဘီဘီစီကို ပြောကြား ခဲ့ရာ မှာတော့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီဟာ သူ့ကို ထောက်ခံ သူတွေ အခု ထက်ထိ အပြင်း အထန် ခုခံ နေကြဆဲ ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးရပ် ဖြစ်တဲ့ ဆာ့တ် မြို့မှာ တော့ ရှိနေ မယ်လို့ မထင်ကြောင်း ပြော ပါတယ် ။
ပြောခွင့် ရသူက ဆက်လက် ပြောကြား ရာမှာ တော့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီရဲ့ ဇနီး၊ သမီးနဲ့ တခြား အရေးပါတဲ့ မဟာမိတ် တွေ ဟာ သံချပ်ကာ ကားတွေနဲ့ အယ်လ် ဂျီးရီးယား ဘက်ကို ထွက်ပြေး သွား ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ လဲ ပြောပါတယ်။အယ်လ် ဂျီးရီးယား အစိုးရ ဘက်ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငြင်းဆို ထားပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:08 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:07 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:05 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:04 AM0comments
တရုတ်နည်းပညာ၊ ဧရာဝတီနဲ့ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာ
by Hlaing Bwa on Sunday, August 28, 2011 at 5:44pm
တရုတ်ပြည်ရဲ့ တဟုန်ထိုးစီးပွါးရေး တိုးတက်လာမူကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဟာ တရုတ်ပြည်ထဲက မြစ်တွေပျက်စီးခဲ့ရုံနဲ့ မပြီးပဲ မြန်မာပြည်ကိုမွေးဖွားသန့် စဉ်ပေးခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော မြန်မာ အမျိုးသားပိုင် အမိဧရာဝတီကို သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစင်ဆောက်နေတဲ့ အဆင့်အထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သည်ဓါတ်ပုံ သတင်းဆောင်းပါးမှာ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ မြန်မာတမျိုးသားလုံးကို တင်ပြချင်တဲ့ အခြေခံအချက်ကတော့ တရုတ်တွေဟာသူတို့ ကိုယ်ပိုင်မြစ်တွေကို ဘယ်လိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီလဲ၊ သူတို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီလဲ ဆိုတာကို - ဘာအကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာ မယ်မယ်ရရ မရှိ မြန်မာတမျိုးသား လုံးအတွက် အဘက်ဘက်က ဘာအာမှခံချက်မှမရှိတဲ့ ဧရာဝတီကို လည်မျို ညှစ်နေတဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွါးသက်သက်အတွက် သ္ခင်အားရ ကျွန်ဒဏ်ဝ လုပ်နေတဲ့ မျိုးဖျက် သစ္စာဖေါက် လောက်ကောင် ပုဆိန်ရိုးတစုကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ မြစ်ဆုံရေအား လျှပ်စစ်ထုတ် ရေကာတာ တွေ ကြောင့်ဖြစ် လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ကို နှိုင်ယှဉ်တွေးဆပြီး - သည်သေမင်းတမန် စီမံကိန်းကို အမျိုးသားရေး အသွင် သဏ္ဍာန်နဲ့ရပ် တန့် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်၊ (မြစ်ချောင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်း အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့လွန် တရုတ်တွင် သင်ယူနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနေ By Popular News ဆိုတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ဆင်သေကို ဆိတ်ရေ နဲ့ ဖုံးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သွေးရှူးသွေးတန်းလုပ်ရပ်တွေ ကို နားမယောင်ကြပဲ အရှိ အဖြစ် ကိုလက်တွေ့ ကျကျ ပကတိအတိုင်းမြင်နိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်) ................. လှိုင်ဘွား/ ၈၈
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ ချမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့ အနီး ဖုဟေး မြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံ လိုက်သေနေသောငါးများ (August 17, 20011)
"တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဘယ်တော့မှအမှားကိုဝန်မခံဘူး" (ဟန်စ်ချန် - အာရှရေစွမ်းအင် Three Gorges Dam: China's Dilemma)
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး Three Gorges Dam ကို ယန်စီမြစ်လည်ကနေဖြတ်ပြီးဆောက်ခဲ့ပါတယ်၊ စီးပွါးရေးသမား တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သူတို့ နဲ့ အဆွယ်အပွါးတွေ အားလုံးအကျိုးရှိသွားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် နဲ့ဂေဟဗေဒစံနစ်တွေ အားလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီး တရုတ်တမျိုးသားလုံး အတွက် သမိုင်းဝင် ယန်ဇီမြစ်ကြီး ဘ၀ပျက်သွားခဲ့တာကို မျက်စိမှိတ်လစ်လျူရှူခဲ့ကြပါတယ်၊ အာရှတိုက်ရဲ့အရှည် ဆုံးသော ယန်ဇီမြစ်ကြီးဟာ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား 18,200 မီဂါဝှပ်ထုတ်ပေးတဲ့ Three Gorges Dam ရဲ့ ၀ါးမြိုဖျက်ဆီးခြင်းကို အဖတ်ဆယ် မရအောင် ခံလိုက်ရပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ ချမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့ အနီး ဖုဟေး မြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနေသောငါးများ (August 17, 20011)
သည်ပုံကတော့ ယန်ဇီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ဖေါက်ခဲ့တဲ့ Three Gorges Dam ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ ယန်ဇီမြစ်ပြင်ရဲ့ တစိတ်တဒေသပါပဲ၊
(ယန်ဇီမြစ်ဆိုတာ တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်မှာမြစ်ဖျားခံခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သူ သန်းပေါင်းလေးရာ ကို ရေချိုဖြည့် တင်း ပေးနေခဲ့တဲ့ မြစ်တစင်းပါပဲ)
သည်ဓါတ်ပုံတွေဟာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင်နဲ့ဂေဟဗေဒစံနစ်ကို ဘယ်လောက် အလေးထားနေ သလဲဆိုတဲ့ သက်သေခံပြယုဂ်တွေပါပဲ၊
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ ချမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့ အနီး ဖုဟေး မြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေနေသောငါးများ (August 17, 20011) သည် ဖုဟေးမြစ်ထဲကငါးတွေ အကြီးအသေး တကောင်မျှမကျန်အောင် သေကြေခဲ့ရခြင်းဟာ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ တံတားတစင်းကို ဆောက်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ် လာရခြင်းပါ။ ဒါကိုကြည့်တာနဲ့ တရုတ်နည်းပညာဟာ ဘယ်လောက်အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသလဲ ဆိုတာ မြက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်နိုင်ကြမှာပါ၊
နန်ချင်းမြို့ ဘေးမှာတင် ပုပ်ပွနေတဲ့ ငါးအသေကောင်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဖုဟေမြစ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေပုံပါပဲ၊ (August 17, 20011) ဘာစက်မူမှ မယ်မယ်ရရ မတိုးတက်ပဲ သဘာဝပန်းဝန်းကျင်ကိုပဲ မှီခိုအားထား အသက်ရှင်နေရတဲ့ (ဧရာဝတီနဲ့မြစ်ကြီးငါးသွယ် မြစ်ငယ်ငါးရာကိုမှီခိုနေရတဲ့) မြန်မာ့လူဦးရေရဲ့ ၇၀% ရာနှုံးရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀တွေကို သည်မြင်ကွင်းတွေ အပေါ်ကနေ ပြက်ပြက်ထင်ထင် မြင်နိုင်ကြမှာပါ၊
သိပ်မကြာခင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အခုမြင်နေရတဲ့ တရုတ်ပြည်က မြစ်တွေထဲက ငါးတွေလို ပိုးလိုးပက်လက်သေသူသေ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နဲ့ သေဖို့ ကို စောင့်သူစောင့် ဘ၀ရောက်ကြရ တော့ မယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်၊
ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ သည်ငါးတွေလို သေအတူယှဉ်မခွာ အတူသေကြတော့မလား၊
သည်ပုံကတော့ ယန်ဇီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိုပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဟိတ်ဟန်ထုတ်နေခဲ့တဲ့ Three Gorges Dam ကြောင့် July 27, 2011 နေ့ ကဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ရေကြီးမူတစိတ်တဒေသရဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ တစက္ကန့် ကို ရေကုဗမီတာ 70,000 ကျော် နှုန်းနဲ့ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ဒလဟောထွက်လာတဲ့ ရေတွေကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက အာဏာပိုင်တွေမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ ဧရာဝတီကို တရုတ်လက်ထဲထိုးအပ်ခဲ့တဲ့ မောင်အေး နဲ့ သိန်းစိန်တို့မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်လာမဲ့ သည်ဆိုးကျိုး တွေအ တွက် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဘာအာမခံချက်မှမပေးနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ အာမခံချက်ပေးခဲ့တာကတော့ တရုတ်တွေ ကို ဧရာဝတီ ထိုးအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါပဲ၊
တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ တရုတ်အများစုကြီးကတော့ သည်ဆည်ကြီးကို ယံဇီကိုသတ်ခဲ့တဲ့ ငရဲခန်းကြီးလို့ တွင်တွင် ခေါ် နေကြပါတော့တယ်။
ယန်ဇီကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Three Gorges Dam ကြောင့် 2010 မှာ လူ 1,200 ရေသင်္ဂျုင်းမှာ မြုတ်ခဲ့ ရပြီး ဒေါ်လာသန်း ပေါင်း 22 ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်၊
ယူနက်စကို (World Heritage Site) ရဲ့ 2007 အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်နိုင်ငံမှာလူသန်း (၃၀၀) ဟာ ညစ်ညမ်း တဲ့ရေတွေ ကိုသောက်သုံးနေကြရ ပြီး လူသန်းပေါင်း (၁၉၀) ဟာ မသန့် ရှင်းတဲ့ရေသောက်သုံး - သုံးစွဲရမူ ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ရောဂါတွေရနေကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်၊ 2011 မှာ သည်အရည်အတွက်ဟာ ၂၀% ထပ်တိုး လာပြီ လို့ ခန့် မှန်းကြပါတယ်၊
မျိုးဖျက် ပုဆိန်ရိုး သေစ္စာဖေါက်လောက်ကောင် တစုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေ ကနေ့ တရုတ်ပြည်ပြ့ည်ရဲ့ လူနည်စုကောင်းစားပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာ ဘ၀ပျက်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကို မကြုံရ အောင် အချိန်မနှောင်းခင် အမျိုးသားရေးအမြင်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ အလျှင်အမြန်ဝိုင်းဝန်းကြရန်လိုအပ်နေပါပြီ။ (သိပ်မကြာခင်ဖြစ်လာမဲ့ အထက်ကလိုအနိဌာရုံတွေအတွက် သိန်းစိန် နဲ့ မောင်အေး တင်သာမက သူတို့ အဖေတရုတ်တွေလည်း ဘာအာမခံချက်မှမပေးနိုင်ပါဘူး။ တရုတ်တွေ သူတို့ မြစ်တွေဖျက်ဆီးလို့ အားလုံးရစ ရာမရှိတော့ချိန်မှာ နောက်ဖေးအိမ်က စမ်းချောင်းထဲမှာ အညစ်အကြေးစွန့် ဖို့ လုပ်တဲ့ဖြစ့်ရပ်နဲ့ မခြားပါဘူး)
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိုဖျက်ရုံတင်မက ပုဆိန်ရိုးတွေ သူခိုးကိုဓါးကိုကမ်းခဲ့ပါပြီ၊
မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ သည်သေမင်းတမန် စီမံကိန်းကြီးကတော့ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်ခဲ့ပါပြီ။
(ဖတ်ရှူတဲ့အတွက် အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ကိုယ်စား သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
မြန်မာပြည်သည်ဧရာဝတီစီးသ၍တည်ပါစေ။ (ဧရာဝတီပျက်တဲ့နေ့ ဟာ မြန်မာပြည်အသက်ထွက်တဲ့နေ့ ပါပဲ)
လှိုင်ဘွား / 88 (August 27, 2011)
China's Big Dam Problem - http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/08/chinas_big_dam_problem; Bridge construction leads to massive fish deaths - http://www.chinadaily.com.cn/photo/2011-08/18/content_13144428_3.htm; Bridge construction leads to massive fish deaths- http://www.china.org.cn/environment/2011-08/19/content_23241861_2.htm; Ecological disaster in Chinese rivers - http://www.speroforum.com/a/7543/Ecological-disaster-in-Chinese-rivers; China EarthquakeaDam-Induced Disaster? - http://www.internationalrivers.org/node/3827
Posted by အာဇာနည် at 12:29 PM0comments
ဟန်းဖုန်းအသုံးပြု၍လုပ်ကိုင်သည့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို ဖော်ထုတ်
အတွဲ ၂၇ ၊ အမှတ် ၅၃၀
တာမွေမြို့နယ် ဗျိုင်းကွက်နေ အမျိုးသား တစ်ဦးသည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီးများအား နေအိမ်၌ ထားရှိပြီး ပြည့် တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း တာမွေ ရဲစခန်း မှ ဒုရဲအုပ်နှင့်အဖွဲ့ က သတင်း အရ ဩဂုတ် လ ၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ခန့်တွင် ကြိုတင် မှတ်သားထားသည့် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ တန် လေးရွက်အား သက်သေတစ်ဦးကို ပေးအပ်၍ ၎င်းအမျိုးသားကိုင်သည့် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်စေခဲ့သည်။
သက်သေဖြစ်သူမှ ၎င်းထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ အငှားယာဉ်ဖြင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်သူ အမျိုးသမီးနှင့် မေတ္တာညွန့် ရပ်ကွက်ရှိ အုံလွင် လမ်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
သက်သေဖြစ်သူက ကြိုတင်မှတ် သားထားသည့် ငွေကျပ် ၂၀,၀၀၀ ကို ပေးအပ်ကာ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီးက လက်ခံ၍ အုံလွင် လမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာစဉ် အမှုလိုက် ဒုရဲအုပ်နှင့်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးအား မေးမြန်းရာတွင် ငွေကျပ် ၂၀,၀၀၀ အနက် ၆,၀၀၀ ရရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ပြည့်တန်ဆာခေါင်း လုပ်ကိုင်သည့် သန့်ဇော်လင်းဆိုသူ၏ နေအိမ်အား ၀င်ရှောက်ရှာဖွေရာ ၎င်းအား လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်အတူ ပြည့်တန် ဆာလုပ်ကိုင်ရန် ရောက်ရှိနေသည့် အမျိုးသမီး ခြောက်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းက (ပ) ၄၅၂/၁၁၊ ပြည့်တန်ဆာအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)/ ၅(၁)/၈(၁)/ ၇(၁)(က)အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:26 PM0comments
"fierce battle Myitkyina"ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရှိ တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinhydro Bureau မှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်
( "fierce battle Myitkyina"ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရှိ တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinhydro Bureau မှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်" ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင်--> http://www.mediafire.com/?az0bto356d5db5e )
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အပျိုမကို တရုတ်က ခြေတော်တင်နေပါပေါ့
The Irrawaddy River flows from north to south through the center of Burma. Since 2005, Burma's military junta in partnership with the China Power Investment Corporation have been preparing plans to builda3,600 - 6,000 megawatt Irrawaddy Myitsone dam on the river. China Gezhouba is the main dam builder. Locatedamile below the confluence of the Mali and N'Mai Rivers in Kachin State, the source of the Irrawaddy River, the Irrawaddy Myitsone Dam is the largest of seven dams now proposed for these three rivers.
The dam site is located within the Mizoram-Manipur-Kachin rainforest region, which is recognized as one of the world's top biodiversity hotspots andaglobal conservation priority. If built, the Irrawaddy Myitsone Dam would inundate approximately 766 square kilometers of this pristine rainforest and cause irreversible damage to its river systems. The dam would also disrupt transportation of nutrients to the Irrawaddy's delta, which provides nearly 60 percent of Burma's rice.
Local communities oppose the dam not just because of its environmental impacts, displacement, and threats to cultural sites, but also because the dam is located less than 100 kilometers fromamajor fault line, posingarisk to basin inhabitants should an earthquake weaken the dam structure or cause landslides in the reservoir. If the Irrawaddy Myitsone Dam were to break during an earthquake, it would endanger the lives of hundred of thousands of people by flooding Kachin State's largest city, Myikyina.
(For more detail please visit : http://www.internationalrivers.org/en/southeast-asia/burma/myitsone-dam )
Posted by အာဇာနည် at 7:35 AM0comments
မြန်မာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင် download လိုချင်ပါက
မြန်မာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင် download က ဒီမှုာပါ
Posted by အာဇာနည် at 7:19 AM0comments
BGသွေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်ရဲ့သူ့ရဲ့လေးစားဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူမှုရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ အား video ဖိုင်တိုလေးများ တစုတည်းပေါင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအရာရှိ မစ္စတာ ကွင်တားနား မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာအပြီးနောက်ရက်တွင်ပင် သွေးလှူဒါန်းရေး ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေဖြင့် အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးက သောကြာနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ် အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။
ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု ၄ လနီးပါးအကြာတွင် စီရင်ချက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိသားစုဝင်များပင် တက်ရောက် နာကြားခွင့် မရှိသော ၁ နာရီခန့်ကြာ တံခါးပိတ်တရားခွင်တွင် ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားသူကြီး ဦးခင်မောင်ကဦးနေမျိုးဇင်၏ အီးမေးလ်များ အတွင်း တပ်မတော်ကို သိက္ခာချထားသည့် ဆောင်းပါးကို တွေ့ရှိသဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ဖတ်ကြားသွားသည်ဟု တရားခွင်မှပြန်လာသူ တရားခံ၏ရှေ့နေ ဦးလှမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
ထောင်တွင်းချော်လဲရာက ခါးရိုးအက်နေ၍ လက်တွန်းလှည်းဖြင့် တရားခွင်လာရသူ ဦးနေမျိုးဇင်က "တိုင်းပြည် အတွက် သစ္စာရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တယောက်ကို ထောင် ၁ဝ နှစ်ချမှတ်ပြီး ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်ခိုင်း လိုက်တာဟာ လုံးဝ မတရားမျှတမှု မရှိဘူး။ အယူခံလည်းမဝင်ဘူး" ဟု တရားသူကြီးကို ပြန်လည် ပြောဆိုကြောင်း ဦးလှမျိုးမြင့်က ပြန်ပြောပြသည်။
ဦးနေမျိုးဇင်၏ ရှေ့နေများကမူ အမှုကို အယူခံဝင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ဥပဒေလမ်းကြောင်းဆုံးသည် အထိဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ရှေ့နေများဖြစ်သော ဦးလှမျိုးမြင့်နှင့်ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် တို့က သူ၏အမှုတွင် လိုက်ပါကူညီပေးနေသည်။
“ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေဟာ သူ့ဆီကရပါတယ်။ ရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထင်ရှားအောင်မပြနိုင်ဘူး၊ စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ သိမ်းတုန်းကလည်း ဥပဒေကျင့်ထုံးတွေနဲ့ မညီကြောင်းကို ကျနော်တို့ ရုံးတော်မှာ တင်ပြထားခဲ့ပါတယ်”ဟု ဦးလှမျိုးမြင့်က ပြောသည်။အီးမေးလ်ပါ ဆောင်းပါးတွင် ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟို အလုပ်မှုဆောင် ဦးဝင်းတင်တို့က ပြည်ပမီဒီယာများတွင် တပ်မတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုထားမှုများ ထည့်သွင်းရေးသားထားပြီး ယနေ့ခေတ် စစ်သားများ၏ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားနေမှုအကြောင်းများ ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းဆောင်းပါးပါ အသေးစိတ် အကြောင်းအရာများကို မသိနိုင်သေးပါ။
ဦးနေမျိုးဇင်သည် တပ်မတော်တွင် ၁ဝ နီးပါး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၌ တပ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ သူဖြစ်ကာနိုင်ငံရေးပါတီဝင် မဟုတ်ဘဲ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီလေ့ရှိသူ ဦးနေမျိုးဇင်မှာ ခါးဒဏ်ရာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်မှနေ ၍ ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ အရိုးကုဆေးရုံသို့ ယခင် တပတ်မှစ၍ သွားရောက် ကုသနေရသည်။
အဖမ်းမခံရခင်က အင်တာနက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် တဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးနေမျိုးဇင်ကို ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့က တောင်ဒဂုံနေအိမ်တွင် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရပ်ကွက် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ၊ ၂ ပတ်အကြာတွင်နေအိမ်ရှိ ကွန်ပျူတာနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း တို့ကိုလည်း ထပ်မံသိမ်းယူခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုရဲမှူး ဦးသန်းစိုးက တရားလိုပြု၍ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးစဉ်ကပင် ဖမ်းဝရမ်း မပါခြင်း၊ ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ကျော်အထိ တရားရုံးမတင်ဘဲ ဖမ်းဆီးထားခဲ့သဖြင့်၂ဝဝ၈ အခြေခံ ဥပဒေပါ နိုင်ငံသား ရပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အာရှ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် AHRCက ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ် က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ချိန်မှာပင် ဦးနေမျိုးဇင်ကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းသည် အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို သံသယ ဖြစ်စေကြောင်း တောင်ဒဂုံ BGသွေးကူညီရေး အဖွဲ့က ရှုမြင်သည်။
"အပေါ်က လုပ်သမျှကို အောက်က ဖျက်ဆီး နေသလိုပါပဲ” ဟု တောင်ဒဂုံ သွေးကူညီရေး BG အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုညီညီက ဆိုသည်။
သဘောကွဲလွဲသူများကို ထောင်ချရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေမှု၊နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် ပြင်ပပေါက်ကြားစေမှု စသည့် ကိစ္စများနှင့် အကျုံးဝင်ပြီး အနည်းဆုံး ၇ နှစ်မှ ၁၅ နှစ် အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
Posted by အာဇာနည် at 1:17 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 1:11 PM0comments
နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းအကြောင်းပြ လယ်မြေသိမ်းကာ ပြန်လည်ရောင်းချမှုများရှိ
ဟိန်းဇော်	Saturday, 27 August 2011 11:55
မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် သကံ္ကချိုင်းအုပ်စု ညောင်ကုန်းကျေးရွာရှိ စိုက်ပျိုးမြေများ၊စားကျက်မြေများ၊ထင်းစိုက်ခင်း မြေဧက ၅၀၀ ကို ကော်ဖီစီမံကိန်းဟု ဆိုကာ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူထားပြီးနောက် ယခုအခါ ကော်ဖီစီမံကိန်းကို တိတိကျကျ အကောင် အထည်မဖော်ဘဲ သိမ်းယူမြေတချို့အား တရုတ်လူမျိုးများကို ရောင်းချလျက် ရှိနေကြောင်း ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ ဒေသခံများက ဆိုသည်။
“သိမ်းသွားတုန်းကတော့ ကော်ဖီစီမံကိန်းအတွက်ပဲ။ အခုကျတော့ ခေတ်သစ်လယ်ယာမြေနဲ့အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမ အသင်း လီမိတက်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါ လိမ်လည်သိမ်းယူခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလိမ်လည်သိမ်းယူမှုကိုမကျေနပ်ကြတဲ့အတွက်မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဆီ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်က ထိထိရောက်ရောက် မဆုံးဖြတ်ပေးဘူး” ဟု ညောင်ကုန်း ကျေးရွာမှ တောင်သူ ဦးမောင်စိန်က ဆိုသည်။
စိုက်ပျိုးမြေသိမ်းယူခံရသော တောင်သူများနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများက မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ထံ စစ်ဆေးစုံစမ်းပေးရန် တင်ပြ ထားသော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာ ထွက်လာခြင်းမရှိသေးဘဲ ခေတ်သစ် လယ်ယာမြေနှင့် အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်း လီမိတက်က သိမ်းယူထားသည့် မြေကွက်များကို ရောင်းချနေခြင်း၊ တောခုတ် ရှင်းလင်းခြင်း၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်းများအား ရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်သူ ၁၃၇ ဦး က တောင်းဆိုထားသည်။
“ကျနော်တို့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က တောင်သူ ၁၃၇ ဦး သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးရေးထိုးပြီး သမဝါယမအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ နိုင်ငံပိုင် သိမ်းပြီးသားမြေက သမဝါယမပိုင် ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အခု တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်တွေကို ရောင်းဖို့ မြေကွက်တွေ လိုက်ပြတာတွေ ဆက်လုပ်နေ တုန်းပဲ။ တောင်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပြီး လယ်ပိုင်ရှင်တွေ သူရင်းငှားဘဝ ရောက်နေရတာကို စာနာသင့်တယ်” ဟု အဆိုပါ ကိစ္စရပ်ကို လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စိုက်ပျိုးမြေသိမ်းခံရသူ တောင်သူများအနေဖြင့် သိမ်းယူမြေများကို နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း နိုင်ငံအကြောင်းပြ၍ တောင်သူလယ်သမားများကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းအား လက်မခံနိုင်သဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ မြေသိမ်းယူကြောင်း အမိန့်စာ ထုတ်ပြန်ပေးရန် တောင်သူများက တောင်းဆိုထားသော်လည်း အမိန့်စာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
တောင်သူများ စိုက်ပျိုးနေသည့် စိုက်ပျိုးမြေများမှာ မြို့နယ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ မြေခွန်စည်းကြပ် ပေးဆောင်နေသော သီးစားချ ထားသည့် မြေများဖြစ်ပြီး မြေလွတ်မြေရိုင်းများ မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မှ မြေလွတ်မြေရိုင်းဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ခေတ်သစ်လယ်ယာမြေနှင့် အထွေထွေစီးပွားရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်းလီမိတက်မှ တရုတ်လူမျိုးများ အား ရောင်းချရန် လိုက်လံပြသနေသော မြေဧက ၅၀၀ မှာ မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင် ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ် ပြင်ဦးလွင်-မိုးကုတ်လမ်း အနောက်ဘက်အခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။
အလားတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရန်ဟု ဆိုကာမုံရွာမြို့အိုးဘိုထောင်ရပ်ကွက်ရှိ မြေဧက ၆၀ခန့်ကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကစတင် သိမ်းယူ ခဲ့ကြောင်း၊ မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသည့်သီးနှံများနှင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ တန်ဖိုးကို ထိုက်တန်စွာ လျော်ကြေးမပေးဘဲ ပြောင်းရွှေ့ခသာပေးကြောင်း၊ ထို့အတွက် လာမည့် တနင်္လာ နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးထံ စာရေးသား ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေသိမ်းခံရသည့် တောင်သူ ဦးသောင်းထွန်း ကပြောသည်။
“နှစ်သုံးဆယ် ဂရန်ကျပြီးသား မြေတွေကို သိမ်းတာ။ သနပ်ခါးပင်တွေ၊ သရက်ပင်တွေ ပါတယ်၊ လျော်ကြေးပေးမယ် ပြောတယ် ဒါပေမယ့် မရသေးဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တောင်သူဦးသောင်းထွန်းမှာ မြေ၄.၇၅ဧက သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရကြောင်း၊ မြေသိမ်းမှုကိုလက်ခံသော်လည်း ထိုက်တန်သည့် လျော်ကြေးငွေ သို့မဟုတ် မြေကွက်အစား ပြန်လိုချင်ကြောင်း ပြောသည်။
မြေသိမ်းခံခဲ့ရသည့် ဒေါ်အေးအေးကလည်း ၎င်းလုပ်ကိုင်နေသည့်လယ်ယာမြေထဲမှ၁၀ဧကကို သိမ်းဆည်းခံရသော် လည်း လျော်ကြေးငွေ မရသေးကြောင်း၊ သိမ်းဆည်းစဉ်က လယ်တဧကလျှင် ပေ ၈၀ ပတ်လည် မြေကွက် ၁ကွက် အစားပြန်ပေးမည် ဟု မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများက ပြောဆိုသော်လည်း မရရှိကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ထိုသို့ လျော်ကြေးမရရှိသည့် အတွက် အိုးဘိုထောင် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ရှိ နစ်နာသည့် တောင်သူများကစုပေါင်း၍ လက်မှတ်ထိုးကာ တောင်းဆိုကြမည်ဟု သူက ဆက်လက် ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 1:03 PM0comments